हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ – ज्ञानेन्द्र « नेपाली मुटु
« खुल्यो बाटो संविधान संशोधनको तर….
हिजो बुद्ध जयन्ती : आज क्रुद्ध सन्तती »
हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ – ज्ञानेन्द्र
Posted by नेपाली मुटु on May 25, 2010
बुढापाकाहरुले त्यसै भनेका होइनन् रहेछन् । हिङ नभए पनि हिङ बाधेको टालोको पनि सँधै मुल्य हुन्छ । यो उखान त पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमा अझ लागु हुन्छ । उनको शिरबाट ताज खोसिएको निकै समय भइसक्यो तर उनी अझै हिङ बाँधेको टालो हुँ भनेर डिङ हाक्न सक्षम छन् । लाग्छ उनमा केहि फेरिएको छैन, बोलिमा अझै उहि सुस्तता । नचाहिने कुरामा जनताको नाम । पुर्खाको ब्याज खाने लोभ । अझ उनी त नारायणहिटीबाट खेदेर आफुलाई न्याय नगरेको सम्म भनिरहेका छन् । आफ्नो जाने र आउँने भइराख्ने भन्दै राजसंस्था सकिएको हाइपोथेटिकल मात्र हो भन्ने ज्ञानेन्द्रलाई अहिले लोडसेडिङले अलिक दुख दिएको छ रे । उनको कुरा सुन्दा थाहा भयो । ज्ञानेन्द्र शाहमा पुर्वराजामा हुनु पर्ने धङधङी अझै रहेछ । उनमा आफ्नो बेला फेरि आउँनेमा अझै पनि आशा छ । भन्छन् “अहिले समय छैन तर चाँडै नै केहि गर्ने समय आउँन सक्छ । हुन त मलाई कसै कसैले दिवास्वप्न देख्न थाल्यो पनि भने र धमिलो पानीमा माछा मार्न थाल्यो पनि भने । तर मलाई केहि गर्न अनुरोध गर्नेको संख्या पनि कम छैन ।” उनले नेपालकै एउटा एफ.एम सँग कुरा गर्दै भने “राजसंस्था जानुमा मेरो छोरो पारसको केहि हात छैन । उसले जे ग¥यो त्यो उसको महानता हो । तर परिवारको ठुलो सदस्य हुनुको हैसियतमा सबै गुण र अवगुणको जिम्मेदारी म आफु नै लिन चाहान्छु ।” तर उनले आफ्नो छोराको महानता चै स्पष्ट पारेनन् ।
उनले आफ्नो जिन्दगी आम मानिसको तरह नै भएको र यसलाई आफुले रमाइलो तरिकाबाट बिताईरहेको भन्न पनि छुटाएनन् । नागार्जुन बस्दा देखि उनले कुकुर पाल्न थालेका छन् रे । बिहान बिहान त्यही कुकुरलाई कसरत गराउछन् रे । राजनितीक प्रश्नमा उनले भने “बिरगञ्जमा सा¥है गर्मीको अनुभव गरें ।” तर त्यो गर्मी राजनितीको थियो वा के को थियो उनले भन्न चाहेनन् । सदा झै सबै कुरा जनतामा निर्भर छ भन्दै उम्कन चाहे पनि आफुले गरेको कामबाट निराश मात्र भएको र पछुतो नभएको कारण समय मिलेमा केहि गर्न सकिने भन्न छुटाएनन् । उनले अहिले आफ्नो राजनितीक भुमिका केहि नभएको प्रस्ट्याउँन रा.प्र.पा. नेपाल सँग पनि आफ्नो समन्ध नभएको तथा आफ्नो कुनै आधिकारीक पार्टी पनि नरहेको बताए ।
पटक पटक जनताको हवाला दिदै जनता अहिलेको नेताहरुसँग सन्तुष्ट नभएको पनि बताइरहे । उनको संवाद र बोली हेर्दा उनमा फेरि केहि हुनेमा अलिक बढि नै आशा भए झै लाग्छ । तर के एक पटक काम नलाग्ने भनेर फालिसकेको राजतन्त्रको बोझ बोक्न फेरि नेपाली नागरिक अघि बढ्लान् त ? सँधै साना साना कुरामा अल्झिएर देशका मुल मुद्धाबाट टाढिने हाम्रा नेताहरुका लागि पुर्वराजाको यस्ता व्यक्तव्य पक्कै पनि आवश्यक हुन्छ । यसले आमनागरिकमा पनि गणतन्त्रमा रहने अठोट अझ बलियो बनाउँछ । आखिर हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालबाट राजतन्त्रले बिदा लिनुमा सबै भन्दा ठुलो कारण ज्ञानेन्द्र आफु नै त थिए नी ।
अन्तर्वार्ताको पूर्ण विवरण-
के भनेर सम्बोधन गरौँ यहाँलाई ? पूर्वराजा, भावी राजा, उद्योगपति, नेपाली नागरिक?
म सर्वसाधारण नेपाली भनेर चिनिन चाहन्छु।
जनता जान्न चाहन्छन यहाँको दिनचर्या कसरी बित्छ ?
सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीको जस्तै छ मेरो दिनचर्या। अलिकति के फरक छ भने धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन। समय छ। जीवन भनेको फूलको बिछ्यौना हैन काँडा पनि हो। काँडा भए पनि नघोचिने गर्नुपर्छ। म ६ बजे उठ्छु, पाठ गर्छु। नातिनातिनी सँग स्कूल जानुअघि केही समय बिताउँछु। मान्छे भेट्छु, मान्छे भेट्ने क्रममा दिग्गज पनि हुन्छन् सर्वसाधारण पनि हुन्छन्। सबैलाई सुनिदिने धैर्य हुनुपर्छ। १२ बजेपछि लञ्च खान्छु।
जवानी ढल्किसकेको कुरा पनि हैन। तर शरीरलाई पनि अलि रेस्ट दिएर फेरि साढे पाँच छ बजेदेखि भेट्छु नौ दसबजेसम्म। रातिको खाना ९/१० सम्म खान्छु। कुकुर पालेको छु। कुकुर लिएर हिँड्ने ठाउँ छ नागार्जुनमा।
आसेपासेसित भेटघाट कस्तो छ ?
छन् साथीहरु नभा हैन। तर सँधै गहिरो राजनीतिक कुरा मात्र हुँदैन। रमाइलो गरिन्छ। रमाइलो गर्नु भनेको मात्तिनु मात्र हैन। नमात्ति पनि रमाइलो गर्न सक्छ।
तपाईँको आधिकारिक पार्टी कुन हो? राप्रपा नेपाल नै हो कि?
उहाँहरुले सिद्धान्त बनाएको हो। त्यो बनाउँदैमा हाम्रो संगत छ भन्नु भ्रम हो। त्यसो भए धेरै अघि नै राजनीतिक कुरामा लाग्ने थियौँ कि हामी। त्यतातिर ध्यानै गएन। अहिले पनि मन छैन।
राजावादीहरु छहारी नपाएर माओवादी प्रवेश गरेका छन् ? किन ?
यो प्रश्न उहाँहरुलाई नै गर्नुस, मैले जवाफ दिने हैन।
वैशाख ११ अघि पर्दापछाडि भएका सम्झौताबारे के भन्नुहुन्छ ?
तथाकथित सम्झौता बारे धेरै कुरा आइसकेको छ। मेरै मुखबाट निकाल्न सान्दर्भिक छैन पत्रपत्रिकामा आइसकेको छ। धेरै नेपालीले बुझेका छन्। वैशाख ११ को कुरा, वैशाख ८ गतेको कुरा नेपाली जनताले एकचोटी दोहोराउनु पर्छ भन्ने कुरा अहिले सान्दर्भिक छैन।
हिन्दु राज्य हुन्छ भन्नेमा कति संभावना छ ?
मैले भन्ने कुरा हैन त्यो। जनतालाई नै सुसूचित टाठो बनाइदिनु पर्‍यो। ८० प्रतिशत भगवानलाई विश्वास गर्नेलाई कसै न कसैलाई मन त दुखेको होला अहिलेका नेताहरुले विचार गर्नुपर्छ।
जनकपुरमा जानुभयो, जनमत बुझ्न हो ?
सर्वसाधारण नेपाली मन्दिरमा जहिले पनि जान पाउनु पर्छ। हक छ बोल्न। त्यहाँ जुन कुरा गरेको थिएँ त्यो कुरा कतिपय सर्वसाधारणले सोधेको कुरा भनिदिएको हो त्यसो भन्दा मलाई कतिपयले दिवास्वप्न देख्न लागेको, धमिलो पानीमा माछा मारेको भन्दिए। वहाँहरुको पनि भन्ने अधिकार हो। तर नेताहरु भएपछि बोल्न त अधिकार छ सुन्नु उहाँको कर्तव्य हो, सुन्न पनि सक्नुपर्छ उहाँहरुले। मैले आफैले भन्या हैन सर्वसाधारणले व्यक्त गरेको विचार भन्देको हो मैले।
राजा फर्कनु पर्छ भन्ने नारा सुन्दा कस्तो अनुभव भयो?
गर्मीको अनुभव भइरहेको छ। नेपालगन्जमा आएर जाडो कहाँबाट हुन्छ? त्यो पनि यो मौसममा। मैले पसिना चुहाएर हिँड्दा तपाईँहरु पनि हिँड्नु भयो। सर्वसाधारणको माया स्नेह तपाईँहरुले पनि अनुभव गर्नुपर्‍यो। देखिहाल्नुभो भीडमा थिचेको, पछारेको छ। सबै रमाइलो हुने रहेछ। कतिपयलाई छुनै पर्ने ढोग्नै पर्ने।
राजसं‍स्थाले कहिले पनि पपुलारिटी खोजेको हैन, युनिटी खोजेको हो। अहिले पनि त्यही देख्छु। यहाँ आएकामा कुन जात, कुन लिङ्ग, फरकै देखिनँ। सबै नेपाली देखेँ।
राजसंस्था तपाईँ कै पालामा अन्त्य भयो, गिल्टी महसूस हुन्छ ?
I feel little sad not guilty. Because many things could have been avoided. somethings I feel I was betrayed others I feel that people have yet to experience and understand real impact of those actions.
(अनुवादः मलाई दोषी महसूस हैन अलिकति दुःखी महसूस हुन्छ। किनभने धेरै कुरा पन्छाउन सकिन्थ्यो। मलाई कता कता धोका दिइएको महसूस हुन्छ। मलाई लाग्छ कि त्यो घटना (राजतन्त्रको अन्त्य) को वास्तविक असर मानिसहरुले अनुभव गर्न र बु्झ्न बाँकी नै छ।)
राजसंस्था जानुमा छोरा पारसको धुमिलो छविको पनि हात छ भनिन्छ। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
अरुलाई दोष दिएर पन्छाउने काम कसैले गर्नुहुन्न। परिवारको मुख्य मान्छे भएपछि मुख्य मान्छेले नै गुण अवणुण सबै लिन्छ। अरुलाई औँला ठड्याउने मेरो बानी छैन। दोष मैले लिनुपर्छ। अरुलाई पन्छाएर काम गर्ने बानी छैन।
जेठ १४ स‍विधान नबने राजस‍‍‍स्था ब्युँतन्छ, ४७ को संविधान लागू हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक कुरा गर्न पुग्या छैन तपाईँलाई? अहिले कसैले संविधान बन्छ कसैले बन्दैन भनिराखेको अवस्था छ। मैले थप्न घटाउन सक्दिनँ। राजनीतिक कुरा नगरौँ।
राजा वीरेन्द्रको वं‍शनाशमा माओवादीले तपाईँ, भारत र अमेरिकाको हात छ भनेको छ। के भन्नुहुन्छ ?
यो पनि खै मलाई त खै कुनै प्रमाण आएको छैन। जुन आयोग गठन भाथ्यो उहाँहरुले पनि यस्तो कुरा गर्नुभा छैन। यो कुरामा विश्वास गर्छु गर्दिन फ्‌याट्ट भन्न सक्दिनँ।
नारायणहिटीबाट लखेटियो, नागार्जुनबाट पनि लखेट्नु पर्छ भन्ने सुन्दा हाउ डु यु फिल?
आइ फिल एज अ कमन सिटीजन जस्टिस इज नट गिभन टु मी। सामान्य नागरिकका रुपमा मेरो पनि अधिकार छ। अधिकार पाउन अदालत जान सकिन्छ भनेका छन् कसैकसैले मलाई।
सरकारका तर्फबाट के के सुविधा दिइएको छ?
केही पनि सुविधा छैन। लोडसेडिङ मैले पनि भोगिरहेको छु। पानी आउँदैन। मेरो निवासमा त सबै सर्वसाधारणले जस्तो कर तिरेको छु। छोराबुहारी नातिनातिना सबैले कर तिरेका छन्।
नेपालगन्ज पछि भ्रमण योजना के छ?
धेरै ठाउँबाट बोलाइराखेको छ। हेर्दै जाउँ कहिले मौका मिल्छ। व्यवस्था मिले जाने कोसिस गर्छु। जनता माझ जान मलाई कहिले अप्ठेरो थिएन अहिले पनि छैन। व्यवस्था मिले पछि जाने कोशिश गर्छु।
नेपाली जनतालाई धैर्य र विवेक पुर्‍याएर बस्नुस्। अहिलेको समयको माग यही हो। उहाँले खोज्नु भएको जस्तो दस्तावेज आउँछ आउँदैन कुरौँ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानी भएर बाँच्न पाउने कुरालाई गुमाउनु हुन्न। शिर ठाडो पारेर सबै नेपाली सं‍सारको जुनसुकै कुनामा बस्न पाउन् भन्ने आशा छ।
अहिलेको भद्रगोल राजनीतिक अवस्थामा यहाँको केही भूमिका हुन्छ कि टुलुटलु हेरेर बस्नु हुन्छ ?
यो उहाँहरुको कुरा हो। चुप लागेर बस भन्नु भयो भने बस्छु। गर भन्नुभो भने गर्छु।
केही गरौँ जस्तो लाग्दैन ?
त्यो समय आउँदैछ होला। अहिले चाहिँ बेला भा छैन हाहाहा…
This entry was posted on May 25, 2010 at 9:12 pm	and is filed under अनौपचारिक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.